Kinky pasina zvinonetsa - AFRIKHEPRI
Ashwagandha anorwa kushaya simba uye anomutsa libido
Diwe mutsva mumaraibhurari edu! Kinky pasina zvinomumanikidza. Pakupedzisira bhuku muchiFrench pamusoro pekuchengetedzwa kwebvudzi rinotonhora bvudzi. Kinky naRe-Belle! inokukoka kuti uwane munyori uye bhuku rake kuburikidza nekubvunzurudza kwenguva pfupi.
BRC! : Bhuku, musikana ... Miss Grain Pepper, ndiwe aniko?
Miss Pepper Grain: Pakupedzisira apo ndakatarisa bvudzi rangu, raiva 1998. Nguva pfupi pashure, vhudzi rangu rakatanga kuputsa. Yaiva inonakidza uye ichiodza mwoyo zvikuru. Gore iroro, ndakasarudza kuti handichazogoni kururamiswa zvakare, kunyanya sezvo yakanga isiri nguva yekutanga kusakanganisika kwandakaita kwandiri. Zvakanga zvisiri nyore kuti ndirambe ndakavimbika kune vimbiso yangu. Ndakagadzira mabhesi, makate, vanilla, ponytail, mbiri huru cabbages.
Zviri pachena, dzimwe nguva ndaive nechido chakashata chekutevera fashoni, kuita kuti ndiite mavara ezvigaro zvandakaona mumagazini, paTV. Kunze kwekuti nguva yakawanda yenguva, ivo vane maziso eCaucasian vhudzi, saka pane antipodes yangu.
Anenge makore matatu akapfuura, ndakatanga kufambisa mumambure kuti ndione kana pane zvivako zvakatsaurirwa panyaya mushure mekuwa, uye ini handizivi kuti chii chakaitika, pahurukuro "Bworld connection" yakazvipira kune Juliette Smeralda, nyanzvi yezvemagariro evanhu, uyo akanyora bhuku rinoshamisa. Zita racho rakafuridzirwa neyebhuku raFrantz Fanon, "Black skin, white mask" inova "Ganda rakasviba, bvudzi rakatsvuka, nyaya yekuparadzaniswa". Yaiva rudzi rwekuzarurirwa, kuziva. Kuchengetedza masikirwo chete kuti urege kudzikuvadza bvudzi rangu nechigadzirwa chinokonzera zvakasiyana. Yakanga iri kundigamuchira ini sezvo ndakanga ndisina kunze kuedza kuzvishandura ini kuti ndiite somumwe munhu.
Ndakatarisa shamwari dzangu, vanamainini vangu, vakoma vangu, vakadzi, vasikana, vasikana vaduku vane ruvara mumugwagwa, mumugwagwa wechiteshi, muchinyatsoteerera. Ndakacherechedza mamiriro ekudzika kwavo, vhudzi ravo, vigs, mazamu avo uye ndakashamisika kuti vakaona sei. A wig inowanzopfekwa kana munhu akaonekwa ane kenza mushure memakemikrasi. Zvisinei, kune zvizvarwa zvakasiyana zvevakadzi, chiito chekucheka bvudzi kana kuchinja chave chave chinowanikwa uye chinomiririra kunaka.
Ndakatarisawo bhuku pamusoro pekuchengetedza bvudzi rake rakasununguka. Ndinoda kuverenga. Ndinotenga mabhuku uye kazhinji ndoenda kuraibhurari. Saka, ndakatarisa bhuku muFrench raigona kundibatsira mune nzira yangu, ndipe pfungwa, mazano, mazano. Handina kuwana imwe. Kune rumwe rutivi, ndakawana nzvimbo dzakawanda uye mabhuku akazara mazano.
Zvishoma nezvishoma, ndaive nepfungwa yekuzvinyora ini bhuku randakanga ndaritsvaga. Ichi chirevo, ndinochirega chive chakakura, dzimwe nguva ndichichirasa nokutaura kuti handichazobudiriri, kuti zvakanga zvisina maturo, kuti hazvingabatsiri chero munhu kubva kare zvaive zvatove yakasununguka mashoko pamusoro pematare . Uyezve, pakupedzisira, pfungwa yacho yakanyatsobatanidzwa zvokuti kana ndikazviitira zvakanaka, mumwedzi usingapedzi mwedzi, bhuku rangu duku rakazvarwa. Ndakanga ndagadziriswa uye ipapo, pane kuitumira kune muparidzi asina chokwadi chekuti yakachengetedzwa, ndakasarudza kupfuura nemagazini inoda kudiwa neInternet neLulu.com.
Izvi zvinosanganisira, chaizvoizvo, kutora basa rake panzvimbo iyi inozoita kuti riwanike pane chikumbiro chevaverengi vanofarira. Iyo inobatsira ndeyokuti kodzero inonyanya kukosha pane yeklasi yekare. Hakuna chikwama kuitira kuti zvisarudzo zvekugadzira zvisati zvaitika. Izvo zvisingabatsiri ndiyo mutengo webhuku racho. 20 euros, hazvina kudhura. Ini ndinozviziva. Asi undiyeuchidze mari yakawanda yawakashandisa kare pazvinhu zvinoshamisa kuti uchengetedze vhudzi rako? (Lol)
Ndakasarudza kushandisa pseudonym Miss Pepper Girasi mubhadharo kusvika kune zvidiki zviduku zvakasungwa pamwechete zvinoumba bvudzi pazvinenge zvakanyanyisa.
BRC! : Mubvunzo unopisa miromo yangu: chii chakavanzika chako chokuve nevhudzi rakanaka uye refu?
Miss Pepper Grain: Ndinofunga zvakanaka kuti tifunge kuti zvishoma isu tinoshandisa bvudzi redu rakaoma, zvishoma kana tikavarova nekugadzirisa, mavara epamusoro-soro akasimbawo, zvishoma zvatinotsika pasi pezviyo, zvinyorwa, wigs, zviri nani ivo vanokura. Ndiyo chete chakavanzika. Zvadaro, kureba kunofanirwa kusvika kumvere dzedu kunyoresa mujini dzedu. Handifungi kuti ndine nguva yakareba kwazvo zuva rimwe chete asi ichine hurefu hwakanaka, ndinofunga. Iwe unotofanira kuva nemoyo murefu, kusvika pakuziva vhudzi rako uye uwane chakanaka kwauri. Kusiyana nevhudzi rakananga, vanokura mukuzvinyengera uye zvinogona kuonekwa kuti hazvikure nokuti tinowanzoreva kubvudzi raBarbie. Zvechokwadi dzinokura zvishomanana kudarika vhudzi reCaucasian, asi chivimbisei, dzinokura. Pamusoro pezvinyorwa, bvudzi reAfrica rinokura ne +/- 0.8 cm pamwedzi, iyo yeEuropean type ye +/- 1 masentimita pamwedzi uye yeAsia inenge ye +/- 1.5 cm pamwedzi. Kuzvikoro zvenyu! Fungidzira kuti kubva paudiki hwako, wakadzidziswa kuda, kuremekedza nekuchengetedza bvudzi rako pane kuzvisarudzira, chii chave chava kureba?
Kana ari mvere dzenguva dzangu dzenguva, ndiri kupfeka vanilla uye ndinobvuma kuti handitauri zvishoma. Ndinoshandisa shampoo yakakosha. Ndinoedza kusaisa zvakanyanya uye kunyanya kushambidza chifukidzo changu kuti ndibvise chero masara ekusimbisa. Zvadaro, ndinoisa tauro pamusoro wepamusoro apo mvura yakanyanyisa inoputirwa nejira reTire ipapo, ndinoiisa iyo yakaoma mumhepo. Chinhu chinonakidza ndechokuti vanilla yangu inopera (iyo yakakurumbira shrinkage, iyo huru yevhudzi redu) yakambooma uye kuti sezvandinovata kurara, zuva rinotevera, vanowana humwe hurefu. Kana zvisina kudaro, kwemwedzi mishomanana, ndinofunga kuti ndakawana, mushure mekutsvakurudza kwakawanda, chigadzirwa chinondikodzera zvakanaka, organic shea butter that softens them much. Kunyanya bvudzi rangu rinokura, rakanaka kwazvo, asi kwete nenzira yakaipa yeshoko. Ingave yakabatana nehukuru, uremu, ini handizivi, benzi nhau yevhiriji.
Ini akakukokai, Chokwadi, kuziva basa rangu, "rakamonana pasina constraints", chakatsaurirwa kuna vose avo vanoda asi vachiri kuzeza itange munzira dzinongoitika uye zvose nevakadzi kare bvudzi ravo rakamonana pasina achitora musoro.
Ne Miss Pepper Grain
RUDO PASI PESI NECOPTE, iyo diki yakakosha yekufambisa kuti utarisire vhudzi rako rakasvibira bvudzi
1 nyowani kubva ku € 9,50
kubvira June 1, 2020 1:20